Imifanekiso eqingqiweyo kaJedediah Corwyn Voltz eyakhelwe ngaphakathi kwiiNdlu zeMithi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imifanekiso eqingqiweyo encinci kaJedediah Corwyn Voltz eyakhiwe ejikeleze izindlu zemithi
Umzobi osekwe eLos Angeles (UJedediah Corwyn Voltz) iyakha izindlu ezincinci zemithi esongelwe kwizindlu zendlu okanye kwimithi eqhelekileyo yebhonsai kuthotho lwayo olutsha lwesakhiwo esinezihloko 'Kwenye indawo encinci' okanye njengoko izihloko zakhe ngesiNgesi 'Kwenye indawo encinci'. IVoltz isebenze ngaphezulu kweshumi leminyaka ifilimu kunye nezinye iiprojekthi zokwenza ubume besakhiwo ngasinye ukusuka ekuqaleni kunye neenkuni ezincinci, amalaphu esilika, imisebenzi emincinci yobugcisa, kunye namatye anqabileyo afihlwe kwiindawo ezingacingekiyo.
Ukuza kuthi ga ngoku ivelise iindawo zokuhlala ezincinci ezingama-25 ezifana nezakhiwo zokwenyani, ukusuka kumagumbi amancinane okujonga amahlathi akwanti, oomatshini bomoya okanye iivili ezinkulu zamanzi. Iziqwenga ezibonwe apha ziya kujongwa 'IViril eqhelekileyoeLos Angeles ukusukela ngoku Epreli 23.
UJedediah Corwyn Voltz uzinikele ekwenzeni imizobo, kwaye ubonakalisa istudiyo sakhe eSilverlake, California. Umsebenzi wakhe ngu zichatshazelwa lelinye ikamva kunye neiyunivesithi ezifanayo. Emva koko sikushiya igalari yemifanekiso kunye nemisebenzi yakhe, kuya kufuneka ubenomfanekiso-ngqondweni, ixesha kunye nobuchule.
UJedediah Corwyn voltz Uhlala ebonakala ngathi ujikelezwe zizityalo kunye nemifanekiso eqingqiweyo, kuthotho lwemisebenzi yakhe ayicacisileyo izindlu ezincinci zemithi ezijikeleze izityalo ezimnandi kunye necacti.
Ndenza izakhiwo zokumisa ukuhamba, itsho voltz. Ndizifumene ndenza ulwakhiwo oluncinci kule mithi okanye izityalo ngexesha lokuphumla. Kunyaka ophelileyo, ndakhe indlu yam yokuqala yomthi, ukusukela ngoko ndenze phantse ama-25 kubo. Ukongeza, ndakhe iimboniselo ezincinci kumahlathi akwanti, amaqonga asemithini ukuze ndinike imvakalelo yokucamngca, kunye neefilimu zomoya ezinkulu kunye namavili amanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imifanekiso eqingqiweyo encinci kaJedediah Corwyn Voltz eyakhiwe ejikeleze izindlu zemithi
Imizobo emangalisayo ye-surreal yomculi uChristopher Lovell